Yintoni i-Identity yobuKristu?
Inkqubela yamaKristu, eyashumayela ukuba iMelika nguSirayeli oyinyaniso kunye nokuba abalandeli bayo basemsebenzini ovela kuThixo, mhlawumbi enye yezona zifundiso eziyingozi kakhulu kwiMelika namhlanje. Yenza konke kube yingozi ngento yokuba abantu bambalwa baze baqonde ukuba kukho, kuncinci ukuba yintoni imele imele. Ubume bobuKristu yiyona ntetho ebalulekileyo yamaqela amaninzi asebenzayo angamaKristu, kuquka amaninzi ukuba ayininzi mibutho yaseKu Klux Klan .
Ubume bobuKristu kunye no-Israel waseBrithani
Imvelaphi yokunyakaza kwamaKristu aseMelika kunye neCanada angabonakaliswa emva kwexesha le-19 leminyaka. I-Israel yaseBrithani yafundisa ukuba ama-Yurophu aseNtshona, ngakumbi aseBrithani, ayinzala yokomoya neyinyaniso yezizwe ezilishumi ezilahlekileyo zakwaSirayeli-zona, kungekhona amaYuda, babengabantu abakhethiweyo bokwenene bakaThixo. Oku kulungelelaniswa nombono waseMelika ngokwawo ngokuthi "u-Israeli omtsha" kunye ne "Isixeko esiqongileyo" esinika ihlabathi ngokukhanya kukaThixo kunye nentando yesininzi.
Ubume bobuKristu kunye nobuKrestu bobuzwe
Nangona i-Identity yobuKristu ibonisa ubuzwe obukhulu, ubuzwe bayo abufani noko ufumanayo kunye namaKristu amaninzi. Ukwahlula okuphambili kukugxilwa ngokucacileyo kobuhlanga. Ubuninzi bobukhulu bamhlophe phakathi kwamaKristu amaninzi kazwelonke awaziwa kodwa mhlawumbi luncinci; kunye nolwazi lobuKristu, nangona kunjalo, lukholo oluyintloko.
Akunjalo nje ukuba amaKristu afune ukubusa njengabantu abakhethiweyo bakaThixo, kodwa loo maKristu amhlophe kufanele alawulwe.
Ubume bobuKristu kunye nomKristu onguMgaqo-siseko
Nangona kukho ukufana okufanayo, ubuKhristu bamaKristu kunye ne-Christian fundamentalism ziquka ezimbini zezobugcisa ezahlukeneyo. Ubume bobuKristu bubuhlungu ngokukhethekileyo kwingcamango ye-futurist yokunyulwa okuthandwayo.
Bayijonga ingcinga ekhohlakeleyo kwaye eqinisweni bahlala benethemba lokuba bafanele bajamelane noBandezelo ngokwabo. Kubalandeli bokwazisa abangamaKristu, kuya kuba yinto ehloniphekileyo enkulu yokukhonza iNkosi kunye nokulwa nemikhosi kaSathana.
Ubume bobuKrestu kunye noKhuselo lobuNtu
Ubume bobuKristu bubonakaliswa ngokuchasene nobuNtu. Ukholo lwamakholwa luyabazonda amaYuda ngentshiseko kwaye lubandakanya amaYuda njengento ehambelanayo kwi-Identity theology. Amakholwa akhoyo awakhiwe igazi elinzulu kumaYuda athile aqala ngokumanyeneyo phakathi kukaEva nenyoka (ngubani ngokwenene uSathana) kwiJardin yase-Eden. Iingcamango zobuqhetseba malunga namaYuda kunye nemikhosi kaSathana esebenzayo ukuthabatha ihlabathi, zitshatyalaliswa.
Ubume bobuKristu, ukuxhatshazwa kunye noSathana
Ukuzibonakalisa kobuKristu, uSathana unamandla okwaneleyo ukutyhila uThixo etroneni yendalo. Ubume bobuKristu abuyithandi ngokupheleleyo, kodwa kuya kusondela. Ngakolunye uhlangothi, bayazi ukuba bangabambalwa abakhethiweyo bakaThixo, bajoliswe ekuphumeleleni kokugqibela kwiBhayibhile. Ngakolunye uhlangothi, i-theology yayingayi kuphila ukuba uSathana wayengenakuphumelela. Ukubambisana kweqela kuqiniswa ngoloyiko lokuba xa bengenzi umsebenzi wabo empini ezayo, isizathu seNkosi asiyi kuzaliseka.
Ubume bobuKristu kunye noMthetho waseMerika
AmaKristu angamaKristu asebenza ngokuzimisela ukuzisa inkqubo yezomthetho yaseMerika ngokuvumelana nemithetho esemthethweni eBhayibhileni. Ithemba lokubhalwa kwemithetho yaseMelika alunalo kwi-Identity yobuKristu-bayabelana nabo ngamaKristu aphinde ahlaziywa, ingcamango enxulumene kodwa engafaniyo. Ingcamango jikelele kukuba yonke imithetho yomntu kufuneka ibe phantsi komthetho kaThixo, kwaye abalandeli abangamaKristu baqaphele phambili ngosuku apho umthetho wabantu unqabeka khona.
Ubume bobuKrestu kunye nokuPhepha
Ingcamango yokuphila iquka iindidi ezahlukeneyo zeenkolelo kunye neengcamango - uphawu lwe-Christian Identity lubandakanya ukulindeleka kwintlekele esondeleyo, kwaye njengeSirayeli entsha, kufuneka bahoxise kwilizwe lonke kude kube yingozi ekugqibeleni. Ukuhoxiswa kwabo ngokubanzi kwilizwe langaphandle kwiindawo ezizimeleyo kungenza kube lula ukuphazamiseka kwengqondo, malunga nantoni na ngaphandle kwenkqubo yabo encinci njengendawo kaSathana, abangafanelanga ukuhlonipha okanye ukufaneleka.
Ubume bobuKrestu kunye noLwazi oluLungileyo
Ukuqhelaniswa kweendawo zobungqina bokuba ngumKristu ngumxholo oqhelekileyo phakathi kweendidi ezahlukeneyo zamaqela aphezulu. Enyanisweni, oku kuyindawo eqhelekileyo yokungena kubantu abaninzi kwi-Political Identity Politics. Ngeqela elizimeleyo labemi kwicandelo ngalinye elisebenza njengomthetho ngokwakho, ukutolika oko bekubonayo ngokuthi "uMthetho kaThixo" ngokwalo naliphi na ixesha kunye nendawo ethile, sonke sifaka indawo eyingozi. Abaqapheli abazixhobileyo abaziphendulelekanga ngaphandle komntu kodwa ngokwabo yintoni inkqubo yomthetho eyenzelwe ukukhusela.
Ubume BamaKristu kunye noKhuselo lobuKrestu
Inkxalabo ethile kukuba abanye abalandeli bobuKristu babandakanyeka ngokucwangcisa, ukulungelelanisa, kunye nemigudu ebonakalayo yokunciphisa urhulumente kunye nokuzama ukuvelisa umnqweno wendawo, ngokuqhelekileyo kumazwe angasenyakatho-ntshona. Injongo, ngokuqinisekileyo, yayiza kubakho ukubeka "isizwe sama-Aryan" ngokwenene esiya kuba yintlalo, inkolo, kunye neengcamango ezicokisekileyo, zilindele ukuza kwezaKesibini kwaKrestu kunye nendima ebalulekileyo kwiNgxaki.
Zomabini ezi ngcamango, ngokungenangqiqo, zineengcambu kumsebenzi weengcamango ezingenakuqhelaniswa noLwazi: i-Turner Diaries. Isasazwa ngokubanzi kwiingcongolo ze-Identity kwaye icatshulwe ngokuvunywa okukhulu-kwaye mhlawumbi kukhuthazwe ukuqhubhisa ibhomu yaseKlahoma Federal Building, ebonisa ngokucacileyo iziganeko kule ncwadi.
Ezinye izinto ezinjengobundlobongela obufanayo ziquka ezo zeMyalelo, obonakala uboniswe ngokufanelekileyo emva kombutho kwi-Turner Diaries.
Ngowe-1984, amalungu e-Order ayaba i-3.8 yezigidi kwiimoto ezikhuselekile, ezininzi zazo azizange zifumaneke. Iminikelo emikhulu yenziwe kwimibutho engqongqo kunye nezozisi. Ngaloo nyaka baxanduva lokubulawa kuka-Alan Berg, intetho yomsakazo yamaYuda ebonisa i-Denver eyayigxeke ngentshutshiso i-neo-Nazi kunye ne-Identity ideology. Uninzi lwamalungu ekugqibeleni wabulawa okanye wabanjwa.
Ngokuphathelele ukwahlukana, kukho iingcamango eziphikisanayo malunga nokuba kufuneka kuvelwe njani isizwe esahlukileyo. Abanye bakholelwa ekusebenziseni ubudlova, kodwa akunakwenzeka ukuba oko kuya kusebenza. Amanani alabo abaxhasa ubundlobongela ambalwa, mhlawumbi isenzo esilungeleyo sokungaphumeleli kobundlobongela kuya kusebenza kwamanye amaqela. Abanye bacinga ukuba kufuneka kusetyenziswe amandla amancinci kuphela kwaye ukuba ukunyaniseka kwezopolitiko kufanele kube yinto eyintloko. Ngelishwa, akukho ziphakamiso zezopolitiko ezibonakalayo ezizayo. Iprojekthi efana neyodwa kwimbali yaseMerika yayiyimpumelelo engafanelekanga kwaye yabangela inani elikhulu lokufa, ukutshatyalaliswa kunye nosizi.
Iipopayi ezili-10 eziphezulu ukusuka kuma-80s
Ukubhala amakhadi omNyaka omtsha waseJapan
U-Miss Nelson Isicwangciso Sokusilela Isifundo